29 Zvino Jobho akasimudzirazve chirevo chake, akati: 2 “Haiwa, kudai ndaiva mumwedzi yekare kare,+Sepamazuva andaichengetedzwa naMwari;+ 3 Paaiita kuti rambi rake rivhenekere pamusoro wangu,Pandaifamba nomurima ndichivhenekerwa nechiedza chake;+ 4 Sezvandakanga ndakaita pamazuva andakanga ndichiri muduku,+Ushamwari naMwari pahwaiva patende rangu;+ 5 Wemasimbaose paakanga achiri neni,Vashandi vangu pavakanga vakandikomberedza! 6 Pandaigeza mandaitsika noruomba,Uye dombo parairamba richindidururira hova dzemafuta;+ 7 Pandaienda kugedhi retaundi,+Pandaigadzira chigaro changu munzvimbo inoungana vanhu!+ 8 Vakomana vaindiona, vovanda,Kunyange vakura vaisimuka, vomira.+ 9 Machinda airega kutaura mashoko,Uye aibata miromo yawo.+ 10 Inzwi revatungamiriri raivanzwa,Uye rurimi rwavo rwainamatira mukanwa mavo.+ 11 Nokuti nzeve yakanzwa, ikanditi ndinofara,Uye ziso rakaona, rikandipupurira. 12 Nokuti ndainunura munhu anotambudzika aichemera kubatsirwa,+Nenherera nomunhu chero upi zvake akanga asina mubatsiri.+ 13 Kukomborera+ kwomunhu akanga ava kuda kuparara—kwaiuya pandiri,Uye ndaiita kuti mwoyo wechirikadzi ufare.+ 14 Ndaifuka kururama, uye iko kwaindifukidzawo.+Kururamisira kwangu kwakanga kwakaita sejasi risina maoko—uye ngowani. 15 Ndaiva maziso ebofu;+Uye ndaiva tsoka kune akaremara. 16 Ndaiva baba chaivo kuvarombo;+Uye kana iri mhosva yomunhu wandaisaziva—ndaiiongorora.+ 17 Ndaityora mapfupa eshaya dzomunhu anoita zvakaipa,+Uye ndaibvuta chainge chabatwa nemazino ake. 18 Ndaiti, ‘Ndichafira mudendere rangu,+Uye ndichaita kuti mazuva angu awande sejecha.+ 19 Mudzi wangu wakavhurirwa mvura,+Uye dova richapedza usiku hwose riri padavi rangu. 20 Kukudzwa kwangu kunoramba kuri kutsva kwandiri,Uye uta hwangu huri muruoko rwangu hucharamba huchipfura.’ 21 Vainditeerera; uye vaimirira,Vairamba vakanyarara nokuda kwezano rangu.+ 22 Vaisazotaurazve pashure pokunge ndataura shoko rangu,Uye shoko rangu raidonhera pavari.+ 23 Vaindimirira sezvinoitwa mvura inonaya,+Uye vaishama miromo yavo kwazvo nokuda kwemvura yokupedzisira.+ 24 Ndaivanyemwerera—ivo vaisazvitenda—Uye vaisadzima chiedza chechiso changu.+ 25 Ndaivasarudzira nzira, uye ndaigara somukuru wavo;Ndaigara samambo ari pakati pevarwi vake,+Somunhu anonyaradza vanochema.+